DIY MIRO YAR YAR: SIDA LOO SAMEEYO QALAB LOOGU TALAGALAY MOTOBLOCK - MISHIINADA GAARKA AH
In beeraha, inta badan waa in aan wax ka qabanno caws, iyo kiiskan ma samayn karno iyada oo aan wax macmiil ah. Maqaalkeena waxaan kuu sheegi doonaa nooca qalabka, iyo sida aad naftaada u samayn lahayd mashiinka mashiinka naftaada u samee
Haddii aad tahay mulkiilaha guri guri ama meel ku yaalo banaankeeda, markaa hubaal waa in aad wax ka qabataan caws, haramaha iyo geedaha aan loo baahnayn. Cawska cawska waa wax fudud in la nadiifiyo beerta caadiga ah cawska cawska, laakiin nasiib daro, qalabkaas oo kale ma awoodi karo in ay la tacaalaan cawska, caleemaha iyo duurka.
Waa muhiim! Ha isticmaalin gawaarida gawaarida gawaarida leh si loo xakameeyo haramaha waaweyn, waxaa loogu talagalay oo keliya in lagu beero cawska. Haddii kale qalabku si dhakhso ah ayuu u dhacayaa.
Xaaladdan oo kale, waa inaad isticmaashaa makuurrada gaarka ah ee loogu talagalay cawska sare iyo cawska cufan. Iyada oo ay ugu wacan tahay qalabyada qalabkaas, waxay si sahlan kuu badbaadin kartaa korriinka aan loo baahnayn goobta.
Noocyada miraayadaha loogu talagalay motoblock
Dhamaan dhawr nooc oo cows-kaTilmaamo faahfaahsan oo kuwaasi oo hoos ku qoran:
Nooc kasta oo teknoolajiyadeed wuxuu leeyahay sifooyin gaar ah waxaana loogu talagalay inuu qabto hawl ka mid ah kakanaanta.
Rooti - ku habboon aqalada xagaaga. Hawlgalkeeda, mabda'a scythe waa mid caan u ah: sababtoo ah wareegga lugaha dhajinta ee xawaare aad u weyn, waa hawo awood leh oo awood leh, oo cawska u soo jiidanaya dhismaha ama ku tuuraya dhinaca kale. Dhamaan 2 nooc canjeeraha wareegsan:
Koronto. Faa'iidada qalabkani waa mid aan caqli-gal ahayn, bey'ada u fiican. Nidaamka waa mid aad u iftiimaya, wuxuu leeyahay kharash yar, oo sahlan in la shaqeeyo. Tirtiridda qalabku waa inuu ku xiran yahay goobta ama ilaha kale ee awooda. Sida caadiga ah, mishiinnada noocan oo kale ah waxay leeyihiin awood yar. Qalabka korontada ayaa laga yaabaa inay ku lug yeeshaan milkiilayaasha yar yar.
Shidaal Qeybtan oo kale maaha inaad ka baqeyso wixii aad u baxday iyo dhulalka. Beeruhu wuxuu leeyahay awood sare, ma aha mid ku xiran ilaha korontada. Dhibaatooyinka noocan ah waxaa ka mid ah miisaan badan, qaylada shaqada iyo dabcan, gaaska qiiqa.
Ma taqaanaa? Abaabulkii ugu fududaa - dhirbaaxo, ayaa lagu soo bandhigay 1971 Maraykanka, Texas.
Si aad u sameyso xulasho sax ah oo u dhaxeysa laba nooc oo cawska cawska ah, waxaad u baahan tahay inaad si taxadar leh uga fikirto ujeedooyinka aad u baahan tahay mishiinka, meelaha aad qorsheyneyso inaad ku shaqeyso.
Sidoo kale bogga waxaad u baahan tahay cawska cawska. Iyada oo aad, aad u karin karaan cawska, iyo haddii dhaawac dhacdo cawska cawska ah waxaa lagu hagaajin karaa gacmahaaga.
Haddii aad u baahato inaad ka takhalusto cawska dheer, waa inaad si sax ah u isticmaashaa noocan oo kale ah. Waad ku mahadsan tahay mindiyaha qaybta ah iyo sifooyinka qalabka, jarida cawska waxay u dhacdaa si habboon, kaas oo u oggolaanaya in si siman loo dhigo dusha. Heerka awoodda qalabka noocan ahi wuxuu u dhexeeyaa 3 ilaa 6 koronto. Qalabka noocan oo kale ah wuxuu leeyahay xajmiga illaa 120 cm, moodooyinka qaarkood waxaa lagu qalabeyn karaa qaabab gaar ah oo u ogolaanaya in ay shaqeeyaan 7 xawaare.
Qalabka wuxuu awoodaa in uu ka soo kabto haramaha, dhumucdiisuna waxay ka kooban tahay ilaa 3 cm. Sababtoo ah joogitaanka isbedelka, waxaad samayn kartaa qiyaasta dhererka jarista. Dhamaan dhawr nooc isbedelka:
talaabo: waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo qiyaas gaar ah oo la soo jeediyey;
Suuf: waa suurtogal in la doorto dhererka ay ku jiraan xadka uu dejiyo soo saaraha.
Waa muhiim! Iska hubso ka hor intaadan isticmaalin mashiinka: hubso in guntimaha mindhicirka iyo qashinka lagu xiro si fiican loo adkeeyay.
Noocani waa midka ugu xiisaha badan. Waxay noqon kartaa mid ammaan ah oo loogu yeedho universal, tan iyo sifooyinka u oggolaanaya isticmaalka qalabka xagaaga iyo jiilaalka. Xilliga jiilaalka, miro-dhaliyaha ayaa si fudud u qaban doona hawlaha barafka. Iyada oo qalabkani aad cawska ku daaqi kartaa iyo nadiifi qolofka barafka.
Sida loo sameeyo mashiinka loo yaqaan "rotational rotary": Tallaabo tallaabo tallaabo ah
Dhirta guryaha xashiishka ayaa dhawaan caan ah.
Haddii aad leedahay rabitaan iyo waqti, waxaad samayn kartaa unug fiican. Waxaan kuu soo bandhigi doonaa inaad akhrido tilmaamaha loogu talagalay naqshadda ubucda wareega.
Qalabka iyo qalabka loo baahan yahay
Ka hor intaadan bilaabin samaynta cawska, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso qalabka soo socda iyo qeybaha mashiinka mustaqbalka:
qashin laga soo qaado qashin - 2 xabbo;
silsiladda laga soo gooyay silsilad - 1 pc;
mindiyo laga sameeyay birta qalafsan - 8 rodol;
Qalabka waxaad u baahan tahay:
Ma taqaanaa? Gawaarida xayawaanka ah ee loogu talagalay naqshadaynta dadku waxay heleen magaca "faras".
Ka dib qalabka iyo qalabka la diyaariyey, waxaad si toos ah ugu sii wadi kartaa kambaniyada.
Tallaabada ugu horreysa waa in la qodo daloolka maqalka iyadoo la isticmaalayo dherer dhererkeedu yahay 6 mm. Kadibna waxaad u baahan tahay inaad ku darto hareeraha vyker, iyo mindiyaha ilaa hareeraha.
Fadlan ogow in masaafada u dhexeysa sheyga iyo mindi ay tahay in ay ahaato dhowr malyan oo ka badan miisaanka mindida. Xilligan waa mid aad u muhiim ah oo lagama maarmaan ah si ay gacan uga gaysato mindhicirrada xoogga saartayaasha ah ee tooska ah ee loo yaqaan 'disk', kaas oo hubin doona fulinta hawlaha ugu weyn - beerta cawska. Shuruudaha waa 360 ° wareega mindi. Tani waxay ka hortagi doontaa burburka shilalka dhagaxyada ama waxyaabaha adag.
Wixii soo saaris ah ee fuushooyinka loogu talagalay mindida mindiyaha waxaad u baahan tahay biro kareer ah, dhexroorka kaas oo ah inuu yahay ugu yaraan 8 mm. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu dhuujiyo fiilada si joogta ah adoo isticmaalaya diskka.
Dhibaatooyinka ka dhexeeya kumbuyuutarrada caws-ka-soo-celiyaha ah ma kici doonaan haddii aad si adag u adkayso talooyinka.
Sameynta qalabka wax lagu kiciyo ayaa sameeya adiga
Qalab noocan ah ayaa sidoo kale loo samayn karaa si madax-bannaan. Hoos ayaan ku sheegi doonaa sidii aad u samaysan lahayd qalab gacmeed.
Waxa aad u baahan tahay sameynta
Wixii soo saarida qalabka waa in la diyaariyaa:
Marka lagu daro qalabka taxanaha, u diyaari aaladda qalabka caadiga ah: gawaarida, mashiinka, weelka, baalalka.
Si aad isu soo ururisid naftaada, waxaad u baahan tahay raac tilmaamaha:
godadka waxaa lagu qoday barta birta ah ee ku habboon M8 cijada;
hubi in weel kasta uu leeyahay qaybta dhabarka;
hubi in mishiinku heysto inuu haysto kabaalka darawalka;
u hagaajinta mindiyaha labada dhinac ee geedaha;
ku xir xidhxidheyaasha iyo kuwa orodka ah baararka;
Ku rakib sanduuqa ku yaal shaxda.
Iyada oo gacan ka heleysa mashiinka motoblock, habka isku dhafan ayaa lagu samayn doonaa dhaqdhaqaaqa, taas oo u beddelaysa mindiyaha. Waxay sameyn karaan dhaqdhaqaaqa wareega iyo dib u noqoshada labadaba. Sababtoo ah xilligan waa in cawska dhaadheer ee cawska si fudud loo gooyaa. Fadlan ogow in aan la burburin.
Gawaarida xakamaynta guryeynta ayaa sameeya
Iyada oo ay caawimaad ka tahay mishiinka isdifaacay, si fudud ayaad uga takhalusi kartaa cawska oo leh muraayad ballaaran. Tixgeli qaababka wax soo saarida cutubka.
Si loo soo ururiyo mowers Waxaad u baahan doontaa:
sheyga laga sameeyey geeso bir ah;
xaashida birta ama farshaxanka (size 80x40cm);
2 daasadaha cuntada qasacadaysan;
8 maqaar bir ah;
Ma taqaanaa? Meelaha waawayn ee ballaaran ee muraayadda ku yaala makhaayadda, way ka yar yahiin cawska oo ha ka tagin jidadka.
Qaadashada alaabta liistada leh ee la heli karo, waxaad sii wadi kartaa inaad ku soo ururiso qalabka adigoo adeegsanaya qalab heer sare ah.
Waxaan kuu soo bandhigi doonaa inaad akhrido tilmaamaha Kulanka Beeraha:
Ku dhaji xaashi bir ah oo ku yaal shaxda.
Ku rakib labada sawir ee aan lahayn dabool iyo hoos. Bedelkii hoose, ku rakib qalabka maqalka, dhexroorka dibadda - 20 cm, gudaha -17 cm gudaha.
Isku duwo cajaladaha: ku dheji xidhmooyinka.
Ku dheji daboolaha si ay u helaan fogaanta u dhaxaysa iyaga, taasoo u oggolaanaysa inay si xor ah u rogaan.
Ku dheji gacantaada qaybta daboolka, si adag u adkee qaabka.
Ku dhaji warqad ka sameysan dhinacyada birta ah.
Isku xir kabuubyada. Tani waxay ubaahantahay inaad kuhesho cajalad gaadiid.
Ku dhaji bushqada duurka hoose, oo ku dhaji geesaha dambe.
Marxaladda ugu dambeysa, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in ay jirto walax difaac ah oo ku yaal maqdhka, ka dib markaad ku rakibi karto qaab dhismeedka iskudhafka socdaalka.
Noocyada isku xiraha wax lagu xiro si loo dhiirigeliyo
Munaasabadani ma qaadanayso waqti badan, sababtoo ah ma qaadato waqtiyo adag. Muhiim u ah inaad la socoto algorithm xiga:
waxaa lagama maarmaan ah in lagu rakibo qaabka dib u dhaca ee ku xiran mootada;
ka dib, barta ka mas'uulka ah xiriirinta waxaa lagu geliyaa xargaha la sii daayo;
tallaabada xigta, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la joojiyo xidhiidhka pin iyo guga;
xayirid qasab - ka saar culayska xad-dhaafka ah.
Ka hor intaan la sii wadi hawsha qalabkan, waxaa lagama maarmaan ah in la xaqiijiyo amnigeeda. Waxaan ka hadlaynaa xarkaha xiran ee mindiyaha. Ma aha lagama maarmaan in si adag loo galo soo noqoshada - tani waxay horseedi kartaa guul darrida. Isku habee mindiyaha si aanay u weerarin midba midka kale.
Soo koobid, waxaan dhihi karnaa in aysan jirin wax khatar ah oo ku saabsan soo saaridda mowers, iyo, adoo raacaya talooyinka, waxaad awoodi doontaa inaad soo ururiso qalabkan muhiimka ah naftaada.